विश्वासको खडेरीमा पिल्सिएको सम्बन्ध | Image Channel Blog | ImageKhabar.com
होमपेज / ब्लग / विश्वासको खडेरीमा पिल्सिएको सम्बन्ध
विश्वासको खडेरीमा पिल्सिएको सम्बन्ध Published: July 13, 2015 | सोमबार 28 आषाढ, 2072 | 5:30 AM | By Rama Karki | Viewed: 1499 times
२०७२ असार २२ गते घडीले बिहानको ९ बजाएर केही मिनेटमात्र पार गर्दै थियो हतार–हतार म काठमाडौं जिल्ला आदालतले दिएको तारेखमा हाजिर भई अफिस पुग्नुपर्ने भएकोले आफ्नै दौडधुपमा थिए । आमा सरहकी एक आफन्तको अंश चलानको मुद्दामा उहाँ उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि उहाँको वारेस भएर म अदालत जानु परेको थियो । नत्र योभन्दा पहिले जीवनमा कहिल्यै मैले अदालत टेकेकी थिइनँ ।
‘मिनभवन जाने माइक्रो हो भाई ?’ पुरानो बसपार्क नजिक रोकिएको एक माइक्रोका सहचालकलाई सोधेँ । उसले ‘हो हो’ भन्दै माइक्रोमा घचेटी–घचेटी मान्छे चढाउँदै थियो । ठेलमठेल गर्दै म पनि त्यसमै चढेँ । तर माइतीघर मन्डलाबाट मिनभवन मोडिनु पर्ने माइक्रो थापाथलीतिर मोडिएपछि माइक्रो चालकलाई माइक्रो रोक्न लगाएर उत्रिएँ । म पैदलै काठमाडौं जिल्ला आदालततिर हान्निएँ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्दा घडीले बिहानको ९ बजेर ४५ मिनेटको फन्को मारिरहेको थियो । अदालतको गेटमा रहेका नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले १० नबजी अदालतभित्र पस्न नपाइने जानकारी गराएपछि म त्यहीँ नजिकै रहेको चिया दोकानको सानो कुर्सी तानेर बसेँ । त्यहाँ अदालती कामका लागि आएका थुप्रै मान्छे गफिइरहेका थिए । उनीहरु वादी, प्रतिवादी, वकिल, लेखनदास यस्तै–यस्तै हुनुपर्छ– म उनीहरुको गफ सुनेर अन्दाज लगाइरहेकी थिएँ ।
त्यहाँ मैले चिनेका कोही थिएनन् । म केवल स्रोता बनेर उनीहरुको कुरा चाख मानेर सुनिरहेकीमात्र थिएँ । कुराकै प्रसंगमा एकजना सायद उनी वकिल हुनुपर्छ ५५/६० वर्ष जतिका देखिने व्यक्तिले अर्को ४०/४५ वर्ष जति देखिने अधबैंसे पुरुषलाई देखाएर भने– उहाँ चाहीँ मेरो क्लाइन्ट हुनुहुन्छ । मलेसिया, साउदी अरब, कतार र इराक १६ वर्ष बसेर नेपाल हालसालै फर्किनु भएको हो । उहाँको चाहीँ आजसम्म कमाएको सबै सम्पत्ति कुम्लो पारेर श्रीमती अर्कैसँग टाप कसिछन् । बुझ्दै जाँदा थाहा भयो उहाँको श्रीमतीले उहाँलाई एकवर्ष अघि नै डिभोर्स पनि दिईसकेकी रहिछन् । अहिले नेपाल आउँदा श्रीमती त अर्कैसँग पो बस्दीरहिछन्, त्यो पनि आफ्नो १६ बर्षकी छोरी र १४ बर्षको छोरासहित ।
वकिलको कुरा नसकिदै त्यी अधबैंसे क्लाइन्ट अँध्यारो मुख पारेर सोध्दै थिए, ‘होइन हजुर, मैले हस्ताक्षर नगरी आफैं पनि डिभोर्स हुन्छ र भन्या ?’ उनी निर्दोष मुद्रामा देखिन्थे । जीन्दगीभर सँगै जिउने र मर्ने कसम खाएकी अर्धाङ्गिनीले यो हदसम्मको हर्कत गरिन् होला भनेर अझै पत्याइरहेका थिएनन । उनको कुरा सुनेपछि त्यहाँ रहेका भएभरका वकिलहरूले एकै स्वरमा भन्न थाले– हजुर, महिलाले डिभोर्स चाहेमा तपाई–हामी नभए पनि हुन्छ तर हामी पुरुषहरुले मात्र चाहेको भरमा ज्यान जाला डिभोर्स हुँदैन ।
वकिलहरुको कुरा सुनेपछि ती अधबैंसे पुरुष झन् मलिन देखिए । उनको मुहार चैत–वैशाखको खडेरीमा फुस्रिएको डाँडोजस्तै फुङ्ग उडेको थियो । उनले मलिन स्वरमा भने, ‘उसो भए म त बर्बाद भएँ हजुर, जिन्दगीभरी कमाएको पैसा मसँग एउटा सुका पनि छैन, अब त बुढो पनि भइयो, न मरेर जानु, न गरेर खानुको दोसाधमा पो पुगेँ ।’
यसो भनिरहदा उनको निधारमा चिट–चिट पसिना आइरहेको देखिन्थ्यो । उनको कुरा सुनेपछि चिया दोकानकी दिदीले उम्लिरहेको चिया चलाउँदै भनिन्, ‘तपाइँ लोग्ने मान्छेहरु पनि उस्तै, अहिलेको जमानामा त्यसरी विश्वास कसैलाई गर्नु हुदैन थियो नि । अहिले न लोग्नेको भर छ, न स्वास्नीको । अहिले त राम्रा मान्छे सारै भाग्यमानीले मात्र पाउँछन् ।’
म मनमनै सोच्दै थिएँ– हैन यो भाग्य कसले, केले लेख्छ ? साच्चिकै लेख्छ होला कि मान्छेले त्यत्तिकै भनेका हुन् ? यदि साच्चिकै लेखेको हुन्छ भने मेरो आफ्नै भाग्यमा चाहीँ के के लेखेको होला ? के यो भाग्य पढेर सुनाउने मान्छे पाइदैन ? के भाग्यमा लेखेको कुरा चाहीँ मान्छेले भोग्नै पर्छ र ? यसलाई कतै तोडमोड गर्न हामी आफैंले सक्दैनौ र ?
मेरो अर्को मनले बुलन्द भएर भन्दै थियो– किन सक्दैनौ ? हामीले आफ्नो जीवन आफूले चाहेजस्तै बनाउन सक्छौं । त्यसका लागि हामी आफैंमा पनि केही शीप र कला हुनु जरुरी छ । आफ्नो जिन्दगीलाई सफल र सुन्दर बनाउन हामीले धेरै कुरामा सचेत हुन जरुरी छ ।
यो त केवल मेरो मनले मनलाई नै भनिरहेको कुरा थियो तर यता भने गफिइरहेका वकिल चाहीँ आफ्ना क्लाइन्टलाई भन्दै थिए, ‘तपाईसँग विदेश गएको प्रमाण र श्रीमतीलाई पैसा पठाउँदाको कागज छ ? छ भने त्यसको आधारमा पनि केही गर्न सकिन्छ ।’
वकिलका कुरा सुनेपछि अधबैंसे क्लाइन्ट बहकिदै थिए । उनले भने, ‘त्यस्तो पैसा पठाएको बिल, रसिद त एउटा पनि छैन हजुर । यस्तो होला भनेर कसले सोचेको हुन्छ र ? साउदी, मलेसिया र कतार गएको त पासपोर्टमा देखिन्छ तर इराक गएको पासपोर्टमा देखिदैन किनकी इराकमा जोखिमको साथै पैसा राम्रो हुने भएर कतारबाट भागेर म इराक छिरेको हुँ । इराक जान नेपाल सरकारको अनुमति छैन, त्यसैले त्यहाँ गएको विवरण मेरो पासपोर्टमा पनि देखिदैन । तर सबभन्दा धेरै पैसा मैले इराक जाँदा कमाएँ र घर पठाएँ पनि ।’
यस्तै के के भनेर उनी वकिलको कुरालाई जवाफ फर्काउदै थिए । म चाहीँ घडीले १० बजेको संकेत गरेको हुनाले त्यो ठाउँबाट उठेर अदालतभित्र पसेँ । अदालतभित्र पुगेर केही कुरा बुझेपछि मलाई अदालत पनि अस्पताल जस्तै लाग्यो । फरक यतिमात्र, अस्पतालमा जीवन बचाउन गइन्छ, अदालतमा जीवन र सम्बन्धहरु सिध्याउन गइँदो रहेछजस्तै लाग्यो । अस्पतालमा सेतो कोट लगाउनेले उपचार गर्छन्, यहाँ कालो कोट लगाउनेले गर्दोरहेछ– फरक यति नै हो ।
अदालत भित्र २० वर्षदेखि ५० वर्ष सम्मका महिला दिदी बहिनीहरुले डिभोर्स फाइल गर्दै गरेको पनि देखेँ । यस्ता दृश्यले मेरो मन चाहीँ नमिठोसँग कुडियो । ‘होइन, यसरी भोलि हाम्रो भावी पुस्ताको जीवन कता जाला ?’ मैले मनमनै सोचेँ र मनमनै भनेँ, ‘ओहो अग्निलाई साक्षी राखेर सात जन्मसम्मका लागि सँगै जिउने र मर्ने कसम खानेहरुको सम्बन्ध त जाबो काँचको धागो जति पनि बलियो रहेनछ, हाम्रो समाजमा अहिले पनि यति धेरै आमा, दिदीबहिनीहरु छन् जसलाई महिला अधिकारको बारेमा थाहा छैन । बिहे गरेपछि सम्बन्ध बिच्छेद अर्थात् डिभोर्स हुन्छ भनेर उनीहरु पत्याउँदैनन तर यही समाजमा यस्ता महिला पनि छन् जसले महिला अधिकारको दुरुपयोग गरेर सम्पूर्ण नारी जातिकै बदनाम गरिरहेका छन् ।’
कतै आधुनिक बन्ने होडमा हामी सम्बन्धलाई कमजोर बनाइरहेका त छैनौं ? सम्बन्ध जोड्ने र तोड्ने कुरा त अहिले फेसनजस्तै भएको छ । सानो–सानो कुराको बेमेललाई मिलाउनुको साटो सम्बन्ध बिच्छेद नै गर्ने भनेर अड्डी कस्नेहरुले जीवनलाई के ठानेका होलान ? जीवन त्यति सजिलो नै कहाँ छ र जसरी हामी सोच्छौ र कल्पना गर्छौ ? बुवाआमाको सम्बन्ध बिग्रेपछि तिनका छोराछोरीले भोग्ने मानसिक पीडा र समस्याको झन् कुरा गरी साध्य हुँदैन । यस्ता धेरै कुरा जान्दाजान्दै हामी किन सम्बन्धलाई भत्किन दिन्छौ ? हामी मान्छेहरु गर्न हुने–नहुने काम गर्छौं र भाग्यलाई दोष दिन्छौ, अनि भन्छौं– सायद हाम्रो भाग्य यस्तै थियो ।
तर सम्बन्ध र जिन्दगीलाई कता लाने हाम्रो आफ्नै हातमा छ । भाग्यलाई दोष दिनु त गल्ति भएपछि मन बुझाउनलाई भनिने शब्द मात्र हो । आजका पुस्ताले घमण्ड र अहम्लाई छोडेर परिवार, समाज र सम्बन्ध जोगाउन केही सोच्नैपर्ने देखिन्छ । मान्छेहरुमा लागेको विश्वासको खडेरी पनि अचेल सम्बन्धहरु बिग्रनुको एउटा प्रमुख कारण बनेको छ ।